Udinga Ukuqinisekisa i-DNS Endaweni Usebenzisa Abaphathi ku-OSX? | Martech Zone
Udinga Ukuqinisekisa i-DNS Endaweni Usebenzisa Ababungazi ku-OSX?
NgoLwesine, Februwari 21, 2019 ULwesihlanu, February 22, 2019 Douglas Karr
Elinye lamakhasimende ami lithuthele iwebhusayithi yabo kwi-akhawunti yokubamba ngobuningi. Babuyekeze izilungiselelo zesizinda sabo se-DNS samarekhodi e-A ne-CNAME kepha bebenesikhathi esinzima sokunquma ukuthi ngabe isiza besixazulula i-akhawunti entsha yokubamba noma cha (ikheli elisha le-IP).
Kunezinto ezimbalwa okufanele uzikhumbule lapho uxazulula inkinga ye-DNS. Ukuqonda ukuthi i-DNS isebenza kanjani, ukuqonda ukuthi i-Domain Registrar yakho isebenza kanjani, bese uqonda ukuthi umphathi wakho ukuphatha kanjani ukungena kwabo kwesizinda.
Isebenza kanjani i-DNS
Uma uthayipha isizinda kusiphequluli:
Isizinda sibhekwa ku-inthanethi igama leseva ukuthola lapho isicelo kufanele sithunyelwe khona.
Endabeni yesicelo se-web domain (http), igama leseva lizokwenza ibuyisela ikheli le-IP kwikhompyutha yakho.
Ikhompyutha yakho bese igcina lokhu endaweni, okwaziwa njengeyakho Inqolobane ye-DNS.
Isicelo sithunyelwa kumsingathi, ohambisa isicelo ngaphakathi futhi iletha isiza sakho.
Isebenza Kanjani I-Domain Registrar Yakho
Inothi kulokhu… hhayi wonke umbhalisi wesizinda ophatha i-DNS yakho. Ngineklayenti elilodwa, ngokwesibonelo, elibhalisa izizinda zazo nge-Yahoo! Yahoo! empeleni aliphathi isizinda yize livela kanjalo ekuphathweni kwabo. Bangumthengisi nje we AmaTucows. Ngenxa yalokho, lapho wenza ushintsho kuzilungiselelo zakho ze-DNS ku-Yahoo!, Kungathatha amahora ngaphambi kokuthi lezo zinguquko zibuyekezwe real umbhalisi wesizinda.
Lapho izilungiselelo zakho ze-DNS zibuyekezwa, ziyasakazwa kumaseva amaningi ku-Intanethi. Isikhathi esiningi, lokhu ngokwezwi nezwi nje kuthatha imizuzwana embalwa ukwenzeka. Lesi esinye sezizathu zokuthi kungani abantu bezokhokha i-DNS ephethwe. Izinkampani eziphethwe ze-DNS ngokujwayelekile zinokusweleka futhi ziyashesha ngendlela emangalisayo… zivame ukushesha kunombhalisi wesizinda sakho.
Lapho amaseva we-inthanethi esevuselelwe, ngesikhathi esizayo lapho uhlelo lwakho lwenza isicelo se-DNS, ikheli le-IP lapho isiza sakho sabanjwa khona liyabuyiselwa. QAPHELA: Khumbula ukuthi ngithe ngokuzayo lapho uhlelo lwakho lwenza isicelo. Uma ngaphambilini ubucele leso sizinda, i-Intanethi ingahle ibe sesikhathini kepha uhlelo lwakho lwasendaweni kungenzeka luxazulule ikheli elidala le-IP ngokususelwa ku-DNS Cache yakho.
Isebenza kanjani i-Host Yakho ye-DNS
Ikheli le-IP elibuyisiwe futhi eligcinwe ngesilondolozi ngohlelo lwakho lwasendaweni alijwayelekile kwiwebhusayithi eyodwa. Umgcini angaba nenqwaba noma ngisho namakhulu amawebhusayithi abanjwe kukheli elilodwa le-IP (imvamisa iseva noma iseva ebonakalayo). Ngakho-ke, lapho isizinda sakho siceliwe kukheli le-IP, umphathi wakho uthumela isicelo sakho endaweni ethile yefolda ngaphakathi kweseva bese wethula ikhasi lakho.
Ungayixazulula kanjani i-DNS
Ngoba kunezinhlelo ezintathu lapha, kukhona nezinhlelo ezintathu zokuxazulula inkinga! Okokuqala, uzofuna ukubheka nje uhlelo lwakho lwendawo ukubona ukuthi Ikheli le-IP likhomba kuphi kusistimu yakho:
Lokhu kwenziwa kalula ngokuvula iwindi lesikhumulo bese uthayipha:
Noma empeleni ungabheka igama elithile leseva:
Uma uvuselele amasethingi e-DNS kumbhalisi wesizinda sakho, lapho-ke uzofuna ukuqinisekisa ukuthi isilondolozi sakho se-DNS siyasulwa futhi uzofuna ukwenza isicelo futhi. Ukusula inqolobane yakho ye-DNS ku-OSX:
Ungazama futhi ping or nslookup ukubona ukuthi isizinda sinquma yini kukheli elisha le-IP kuleli phuzu.
Isinyathelo esilandelayo kungaba ukubona ukuthi ngabe amaseva we-Internets DNS avuselelwe. Gcina I-DNSstuff Kuyasiza kulokhu, ungathola i-DNSreport ephelele ngeplatifomu yabo lokho kuhle impela. ligcina uthi lokuphotha luzungeza ine-DNS Checker enhle kungxenyekazi yayo lapho izohamba khona nombuzo -Google, I-OpenDNS, I-Fortalnet, kanye ne-Probe Networks ukubona ukuthi izilungiselelo zakho zikhule kahle yini kuwebhu.
Uma ubona ikheli le-IP likhonjiswe kahle kuyo yonke iwebhu futhi isiza sakho asikabonakali, ungadlula futhi kumaseva we-Intanethi bese utshela isistimu yakho ukuthi ithumele isicelo ngqo ekhelini le-IP. Ungakufeza lokhu ngokubuyekeza ifayili lakho le-hosts bese ususa i-DNS yakho. Ukuze wenze lokhu, vula iTheminali bese uthayipha:
sudo nano / njll / amabamba
Faka iphasiwedi yakho yohlelo bese ucindezela u-Enter. Lokho kuzoletha ifayili ngqo ku-Terminal ukuze lihlelwe. Hambisa isikhombisi sakho usebenzisa imicibisholo yakho bese ufaka umugqa omusha nekheli le-IP elilandelwa igama lesizinda.
Ukugcina ifayela, cindezela lawula-o kukhibhodi yakho bese ubuyela ukwamukela igama lefayela. Phuma kusihleli ngokucindezela ukulawula-x, okuzokubuyisela kulayini womyalo. Ungakhohlwa ukufaka i-cache yakho. Uma isayithi lingaveli kahle, kungahle kube inkinga yendawo kumphathi wakho futhi kufanele uxhumane nabo ubazise.
Inothi lokugcina… ungakhohlwa ukubuyisela ifayili lakho lababungazi kunguqulo yalo yangempela. Awufuni ukushiya ukungena lapho ofuna ukukuvuselela ngokuzenzakalela!
Ngokulandela lezi zinyathelo, ngikwazile ukuqinisekisa ukuthi engikufake ku-DNS kumbhalisi kusesikhathini, okufakiwe kwe-DNS ku-Intanethi bekusesikhathini samanje, inqolobane yami ye-DNS ye-Mac isisesikhathini, futhi i-DNS yomsingathi wewebhu ibisiphezulu kuze kube manje… kuhle ukuhamba!
I-Moosend: Ukumaketha nge-imeyili nokuzenzekelayo
Ungayisebenzisa kanjani i-Article elandelayo ye-Blog yakho ukuthola umthelela omkhulu.